SPC Smartee Boost, saacad caqli badan oo qiimo aad u macquul ah | Wararka Gadget
Saacadaha casriga ah ayaa durbadiiba si dimoqraadi ah loogu mahadceliyey, oo ay ka mid yihiin, magacyada sida SPC kuwaas oo bixiya badeecado kala duwan oo ay heli karaan dhammaan dhagaystayaasha. Xaaladdan waxaan ka hadlaynaa saacado caqli badan, taas oo ah waxa aan u baahan nahay inaan falanqeyno, iyo si gaar ah oo ku saabsan beddel aad u suubban haddii aan ka hadalno qiimaha iyo shaqooyinka.
Waxaan ka hadleynaa SPC's Smartee Boost, smartwatch -kii ugu dambeeyay oo leh GPS isku dhafan iyo madaxbannaani weyn oo lagu bixiyo qiimo dhaqaale. Nala soo hel qalabkan cusub oo haddii ay runtii u qalanto in kasta oo ay tahay qiima macquul ah, ha seegin falanqayn qoto dheer.
Sida dhacda marar badan, waxaan go'aansannay inaan la socono falanqayntaan fiidiyaha kanaalkayaga YouTube, habkan waxaad awoodi doontaa inaad ilaaliso ma aha unboxing -ka oo keliya laakiin sidoo kale dhammaan qaabeynta qaabeynta, markaa waxaan kugu martiqaadeynaa inaad dhammaystirto falanqayntan waad fiirin kartaa oo naga caawin kartaa inaan sii wadno koritaanka.
2 Astaamaha ugu muhiimsan ee farsamada
3 Shaashadda iyo abka
4 Tababar iyo madaxbannaanid
5 Isticmaalka isticmaalaha iyo khibrada
Sida laga filan karo saacad ku jirta qiimahan, waxaan helnaa qalab inta badan ka samaysan caag. Sanduuqa iyo kan hoose labaduba waxay isku daraan nooc ka mid ah caag madow oo matte ah, inkasta oo aan sidoo kale iibsan karno nooca casaanka ah.
Miisaan: 35 garaam
Cabirrada: 250 x 37 x 12mm
Suunka lagu daray waa mid caalami ah, marka si fudud ayaan u beddeli karnaa, taas oo ah faa'ido xiiso leh. Waxay leedahay cabbir guud oo ah 250 x 37 x 12 mm sidaa daraadeed si gaar ah uma weyna, culeyskeeduna waa 35 garaam. Waa saacad si caddaalad ah u cufan, in kasta oo shaashadu aysan qabsanayn xagga hore oo dhan.
Waxaan leenahay hal badhan kaas oo u ekaysiinaya inuu yahay taaj dhinaca midig iyo xagga dambe ah, marka lagu daro dareemayaasha, waxay leedahay aagga biinanka magnetized ee lagu dallaco. Marka la eego arrintan, saacaddu waa raaxo iyo fududahay in la isticmaalo.
Astaamaha ugu muhiimsan ee farsamada
Waxaan xoogga saarnaa isku xirnaanta, waana inay ku wareegsan tahay laba qodob oo aasaasi ah. Midda hore waa inaan haysanno Bluetooth 5.0 LE, Sidaa darteed, heerka adeegsiga nidaamku si xun u saamayn maayo batteriga aaladda lafteeda ama ta casriga ah ee aan adeegsanno. Intaa waxaa dheer, waxaan leenahay GPS, Markaa waxaan awood u yeelan doonnaa inaan si sax ah u maamulno dhaqdhaqaaqyadeena marka aan maareyneyno fadhiyada tababarka, imtixaannadeenna waxay ku bixisay natiijooyin wanaagsan. Sidaas oo kale GPS -ku wuxuu kaloo na helaa si aan u tixgelinno qaybo ka mid ah dalabka Cimilada ee lagu daray.
Saacaddu waa biyuhu ilaa 50 mitir, mabda 'ahaan waa inaysan wax dhib ah keenin marka lala dabbaalanayo, tan waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay inay ka maqan tahay makarafoon iyo kuwa ku hadla, si kastaba ha ahaatee wuu gariiraa oo si fiican buu u sameeyaa. Sida iska cad waxaan leenahay qiyaasta garaaca wadnaha, laakiin kuma lihin cabirka oksijiinta dhiigga, oo ah astaamo sii kordhaya.
Ma seegi hawl kale ilaa inta aan tixgelinayno qiimaha hoose ee badeecadan, oo loogu talagalay baaxadda gelitaanka.
Shaashadda iyo abka
Waxaan leenahay a IPS LCD guddi aad u yar, gaar ahaan waa guud ahaan 1,3 inji taasi waxay ka tagtaa qaab hoose oo xoogaa la sheegayo. In kasta oo ay taasi jirto, waxay muujineysaa in ka badan ku filan waxqabadka maalinlaha ah. Sababtoo ah bixinta imtixaannadayada waxaan awoodnay inaan si fudud u akhrino ogeysiisyada waxayna leedahay faa'iidooyin muuqda.
Midda kowaad waa in ay tahay guddi dahaarka leh oo waliba leh dahaadh-diid si fudud loogu isticmaalo iftiinka qorraxda. Haddii aan tan ku raacno iftiinka ugu sarreeya iyo kan ugu yar ee ay bixiso, xaqiiqadu waxay tahay in isticmaalkeeda bannaanka ay tahay mid raaxo leh, waxay leedahay xaglo wanaagsan mana luminno wax macluumaad ah.
Barnaamijka Smartee ayaa diyaar ah macruufka iyo Android Waa iftiin, marka la iswaafajinayo waa inaan sameyno oo kaliya kuwa soo socda:
Ku dallac aaladda si aad u kiciso
Waxaan soo degsanaa arjiga
Waxaan galnaa oo buuxineynaa xogwaraysiga
Waxaan ku baari karnaa barcode lambarka taxanaha ah ee sanduuqa
Sanduuqayaga Smartee SPC ayaa soo muuqan doona oo guji ku xir
Si buuxda ayaa loo waafajin doonaa
In aplicación Waxaan la tashan karnaa macluumaad badan oo la xiriira waxqabadkeena jireed sida:
Fogaanshaha ayaa safray
Tababarro la sameeyay
Raad -garaaca garaaca wadnaha
In kasta oo ay jiraan wax kasta, dalabka ayaa laga yaabaa inuu aad u fudud yahay. Waxay na siisaa macluumaad yar, in kasta oo ay ku filan tahay waxa aaladdu sheegato inay bixiso.
Tababar iyo madaxbannaanid
Qalabku wuxuu leeyahay tiro presets tababarka, kuwaas oo gaar ahaan kuwan soo socda:
Ku ordaya treadmill
Gudaha ku soco
Dabbaal biyo furan
GPS ayaa si otomaatig ah loogu hawlgelin doonaa hawlaha “bannaanka”. Waxaan ka beddeli karnaa gaabinnada tababbarka dhexgalka adeegsadaha saacadda lafteeda.
Batariga waxaan haysannaa 210 mAh oo bixiya ugu badnaan 12 maalmood oo joogto ah, Laakiin qaar ka mid ah kalfadhiyada firfircoon iyo GPS -ka ayaa shaqeynaya, waxaan hoos ugu dhignay 10 maalmood, taasna ma xuma.
Isticmaalka isticmaalaha iyo khibrada
Is -dhexgalka isticmaalehu waa mid dareen leh, haa, waxaan haysannaa oo keliya 4 dhinac oo aan ku beddeli karno annaga oo saxafadda dheer ku samaynayna “bilowga”. Sidaas si la mid ah, dhaqdhaqaaqa dhinaca bidixda waxaan si toos ah ugu helnaa GPS -ka iyo shaqada helidda taleefanka, kaasoo dhawaaqa soo saari doona.
Ku dhejiyay: 9 August 2021
Wax ka badalidii ugu dambeysay: 3 August 2021
Dhinaca midig waxaan haynaa xogta caafimaadka iyo tababarka, iyo sidoo kale khaanadda arjiga waxaan awoodi doonnaa inaan helno digniinta, dalabka Cimilada iyo qaar kale oo naga caawin doona waxqabad maalmeedka. Si aad u noqoto qof daacad ah, waxay bixisaa shaqooyin kooban oo ka baxsan waxa jijiminta raadinta isboortiga ay bixin lahayd, laakiin cabbirka shaashadda iyo is -dhexgalka adeegsadaha ayaa fududeynaya in la isticmaalo maalin kasta.
Marka la soo koobo, waxaan haynaa badeecad u ekaanaysa jijimooyin raadraac, laakiin waxay bixisaa shaashad leh iftiin wanaagsan iyo cabbir ku filan. si loo fududeeyo isticmaalkeeda qiimo ka hooseeya 60 euro meelaha caadiga ah ee iibinta. Beddel aad u xiiso badan iyo qiimo aad u macquul ah markaan ka hadlayno smartwatch.
Bandhig shaqo iyo dhalaalaya
Waxay leedahay GPS iyo jimicsiyo badan
Waad ku dabaalan kartaa
Madax -bannaanida ayaa hoos u dhacda iyadoo GPS -ku shaqeynayo
Mitirka ogsajiinta ayaa maqan
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Reviews » SPC Smartee Boost, saacad caqli badan oo qiimo aad u macquul ah leh
IKEA SYMFONISK jir af -hayeenka, cod fiican iyo naqshad badan [Dib -u -eegis]